Tenga Nomegestrol acetate powder (58652-20-3) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Nomegestrol Acetate upfu
Rating: SKU: 58652-20-3. Category: Madzimai eHormoni
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika kuhuwandu hweNomegestrol acetate powder (58652-20-3), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Nomegestrol acetate powder , mazita emakemikari 17-Hydroxy-6-metyl-19-norpregna-4,6-diene-3,20-dione, inonyanya kusarudza, inosarudza progestogen, yakazara agonist pa progesterone receptor, isina kana kusungirirwa kune dzimwe steroid receptors.
Nomegestrol Acetate powder Basic Characters
Molecular Kurema: 328.45
Melt Point: 177-180 ° C
Storage Temp: cold storage
Kemikari Mazita: Nomegestrol Acetate powder
Mazita eBrand: Lutenyl naZoely, nevamwe, 19-Normegestrol powder, Nomegestrol (INN) powder, 58652-20-3
Nomegestrol Acetate powder Usage
Nomegestrol Acetate powder (CAS 58652-20-3) yakawanda, inogadzira progestogen yemumuromo ine unhu hwakanaka hwekuregererwa uye kusagadzikana kwezvinhu zvinoshandiswa mumagetsi. Kusiyana nehuwandu hwevanhu vakura progestogens, iyo yaiva 19-nortestosterone yakagadziriswa yakagadzirirwa zvakanyanya nokuda kwebasa ravo retiginadotropic sechikamu chemahomoni ekudzivirira kubata pamuviri pamwe neestrogen, Nomegestrol Acetate powder yakagadzirwa ne 19-norprogesterone yakagadzirirwa kusunga zvakananga kuprogesterone receptor, uye iri kushayikwa muhukama kune dzimwe steroid receptors. Nomegestrol Acetate powder ine simba rakasimba antiestrogenic pamwero we endometrium uye ine simba retigitiadotropic basa, asi pasina chero yakasara uyerogenic kana glucocorticoid. Pamutengo we 1.25 mg / zuva, Nomegestrol Acetate powder inhibits ovulation apo ichibvumira follicle kukura, asi pamatazi e2.5 kana 5 mg / zuva, zvose zvipembenene uye kukura kwemapurisa zvinodzingwa. Chiito chinonzi Antigonadotropic chiito cheNomegestrol Acetate powder chinopindirana, sevamwe progestins, pane hypothalamic uye pituitary level. Uyezve, Nomegestrol Acetate powder ine zvishoma zvekuita antiandrogenic. Kubviswa kweNomegestrol Acetate powder kunokurumidza mushure mokutaura kwemashoko, kusvika pakupamusoro kwema serum mukati maawa 4, neine mararamiro eupenyu hunenge maawa anenge 50 ..
Nomegestrol Acetate powder (19-Normegestrol powder) yakashandiswa zvinobudirira pakurapa kumwe kusagadzikana kwemadzimai (kuvhiringidzika kwekuenda kumwedzi, dysmenorrhoea, premenstrual syndrome) uye sechikamu cheHRT chakabatana ne estradiol yekusunungurwa kwezviratidzo zvema menopausal; yakagamuchirwa muEurope senge monotherapy yekurapwa kweiyo menopausal syndrome, hosha dzechibereko uye menorrhagia, uye pamwe chete neestrogen yekurapa zviratidzo zvekumwedzi. In vitro data inoratidza kuti Nomegestrol Acetate powder inochengetedza iyo inobatsira haemostatic mhedzisiro yeestrogen; uyezve, Nomegestrol Acetate poda ine kwazvakarerekera kana zvinobatsira pama lipid profiles, uye haina kukanganisa glucose metabolism kana bodyweight. Nomegestrol Acetate powder yakaratidza kushomeka kwechiitiko cheprostrative mune zvakajairwa uye zvine cancer kenza yemazamu, uye haina mhedzisiro inokanganisa kugadzirisa mapfupa. Izvi zvine simba antigonadotropic zvivakwa, uye zvimwe zvinobatsira metabolic uye pharmacological hunhu, zvinoratidza kuti Nomegestrol Acetate poda inogona kuve progestogen inoshanda yekushandisa pamwe neestrogen mumuromo estrogen / progestogen yekurapa kubata pamuviri uye muHRT, nepo ichipawo mamwe mabhenefiti yehutano hwevakadzi.
Chii chinonzi nomegestrol Acetate powder
Nomegestrol Acetate powder (NOMAC) inowanikwa iga yoga uye inobatana ne estrogens.Ikutevera mazano aripo:
NOMAC 3.75 mg uye 5 mg mahwendefa emuromo (Lutenyl) - inoratidzwa ne menopausal hormone therapy uye zvirwere zvegynecological
NOMAC 3.75 mg uye estradiol 1.5 mg mahwendefa emuromo (Naemis) - inoratidzirwa nokuda kwemainopausal hormone therapy
NOMAC 2.5 mg uye estradiol 1.5 mg mahwendefa emuromo (Zoely) - akaratidzirwa kuitira kubata pamuviri
Iko kuwanikwa kwezviumbwa izvi zvakasiyana nenyika
Kana iwe warasikirwa nenguva
Kana iwe wakatora mahwendefa ako ose panguva yakakodzera, uye iwe usati wakurutsa, kana uine chirwere chakanyanya kana kushandisa mamwe mishonga iwe haunakwanisi kuva nepamuviri. Ramba uchitora Nomegestrol Acetate powder (NOMAC) sekugara.
Kana uchinge wasisa nguva yako kaviri mumutsara, unogona kuva nepamuviri. Usatanga gwaro rinotevera reNomegestrol Acetate powder (NOMAC) kusvikira chiremba wako akakutsvaga kuti hauna pamuviri.
Kana iwe ukatora zvakawanda (kudarika zvakanyanya)
Pakave pasina ruzivo rwekukuvadza kunokonzera kukuvadza kubva pakutora nomegestrol Acetate powder (NOMAC) panguva imwechete. Kana iwe ukatora zvakanyanya Nomegestrol Acetate powder (NOMAC) unganzwa uchinzwa kurwara, kurutsira kana kuti uine ropa remukadzi.
Kana ukaona mwana atora Nomegestrol Acetate powder (NOMAC), bvunza chiremba wako kuti akupe mazano
Nomegestrol Acetate powder inoshanda sei
NOMAC chirongwa chekudzivirira pamuromo, chinowanzozivikanwa se "Kuberekwa Kudzora Piritsi" kana "Iyo Piritsi" iyo yakatemerwa kudzivirira iwe kubva pakubata nhumbu.
NOMAC inodzivirira kubata nenzira dzakasiyana siyana:
-I inodzivisa mazai ekubudiswa kuburikidza nekuita kuti ikure.
-Kutsvaga mhondi yekervical kushandiswa kuita kuti zvive zvakaoma kuti chirume chisvike paii.
-Kubatanidza rwonzi rwechibereko chinoita kuti zvive zvisina kukodzera kuiswa.
Kufanana nevamwe progestogens zhinji, NOMAC rave kuongororwa uye kuwanikwa ezvokunambira kunze kwomuviri waamai kutitadzise kutendeuka estrone sulfate kuti estrone (via chinovhiringidza pamusoro steroid sulfatase) uye estrone kuti estradiol (via chinovhiringidza pamusoro 17β-HSD) pa yakakwirira kuwanda (0.5-50 μM) uye kuti akurudzire kutendeuka estrone kupinda estrone sulfate (via activation kuti inonzi estrogen sulfotransferase kwebasa) panguva yakaderera kuwanda (0.05-0.5 μM), achirangarira haana kukanganisa aromatase basa chero kuedzwa wevasungwa (kuna 10 μM) .These mabasa kuzviratidza kuva PR -dependent, sezvo NOMAC ndechokuti simba mukubudisa navo PR-vapfumi sero mitsetse (semuenzaniso, T47-D vs. MCF-7) uye vanogona nemutemo kubudikidza PR antagonist mifepristone (RU-486) .Although ari zvekuchipatara zvinorehwa zviito izvi kujeka uye vane asi kuti nekusimbiswa vivo kana kuongororwa mukati kurapwa zveBhaibheri, zvave kuti NOMAC navamwe progestins angabatsira pakurapa ER positive kenza yemazamu kuburikidza kudzikira chechetere S kuti inonzi estrogen mu zamu tissue.In sezvakanga pfungwa iyi, ezvokunambira kunze kwomuviri waamai, NOMAC haina proliferative migumisiro pachipfuva rinenge haasi kukurudzira zamu sero kuwanda Via PGRMC1 (saizvozvowo progesterone), uye kunoderedza mazamu proliferative migumisiro estradiol kana akawedzera kwairi mukati
Usatora Nomegestrol Acetate powder (NOMAC) kana iwe uine zvirwere zvekuti:
-ine mishonga ine Nomegestrol Acetate powder kana isradiol
-zvimwe zvishandiso zvakanyorwa pamagumo epeji rino.
Zvimwe zvezviratidzo zvehutachiona zvinogona kusanganisira:
-kuvhunduka kana kunetseka kufema
-kugara kwechiso, miromo, rurimi kana zvimwe zvikamu zvemuviri
-rash, itching kana mikoko paganda.
Ko Nomegestrol Acetate powder Iine Matambudziko Api
Kufanana nemishonga yose, Nomegestrol aceate (NOMAC) inogona kuva nemigumisiro. Dzimwe nguva ivo vakakomba, nguva yakawanda yavasina.
Zviito zvakanyanya zvakawandisa (zvichiitika kune anopfuura imwechete nevashandi ve10):
-kuchinjwa mukuenda kumwedzi (kurega kusavapo kwemwedzi kana kupera nekubuda ropa / kuonekwa)
Nharaunda dzinowanzoitika (inowanikwa kune vanopfuura imwechete nevashandisi ve100, asi pasi pevashandisi ve10):
-kuda kufarira zvepabonde;
-kudzvinyirira / kuora mwoyo;
-musoro kana migraine;
Kazhinji migumisiro (inowanikwa kune anopfuura imwechete nevashandi ve1000, asi-pasina mumwe muvashandi ve100):
-kuchengetedzwa kwekuchengetedza (edema);
-siye asi nguva shoma;
-kushandiswa kwekugadzira asi pasina kubata;
-paini panguva yepabonde;
-kunyara mumudzimai kana mucheka;
-kuwedzera mukati mehutachivi hwechiropa.
Nzira yekutenga Nomegestrol Acetate powder kubva kuAASraw